मुख्य खबर – Page 15 – www.visionfm.org
ओखलढुंगामा जिप दुर्घटना, १ जनाको मृत्यु, ८ घाइते
ओखलढुंगा- ओखलढुंगामा सवारी टाटासुमो जिप दुर्घटना भएको छ । आईतबार मध्यान्ह १२ः५५ बजे प्राप्चाबाट सदरमुकाम आउदै गरेको ना १ ज ५५६२ नम्बरको टाटा सुमो मोलुङ गाउँपालिका २ मा सडकबाट १ सय मिटर तल खसेको हो । दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यू भएको छ भने एक बालक सहित ८ जना घाईते भएका छन् । मृत्यू...
जंगफुडको प्रयोग रोक्न अाेखलढुंगामा रेडक्रसको अभियान
ओखलढुंगा- विद्यालयमा जंगफुडको प्रयोग रोक्न ओखलढुंगामा रेडक्रसले अभियान सुरु गरेको छ । विद्यार्थीका माध्यमबाट समुदायमा सचेतना छिटो फैलिने भएकाले रेडक्रसले विद्यालयमा जंगफुडको प्रयोग रोक्न अभियान थालेको हो । रेडक्रसले सञ्चालन गरेको भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रम अन्तरगत जिल्लाका साविक...
लेखापाल नहुदा खिजिदेम्बाकाे योजना प्रभावित
१२ जेठ, ओखलढुंगा । खिजिदेम्बा गाउँपालिकाको आफ्नै लेखापाल नहुँदा आर्थिक कारोबारमा समस्या आएको छ । लेखापालको अभावमा गाउँपालिका भित्रका सम्पुर्ण विकासे आयोजनाको आर्थिक कारोबार गर्न कठिन भएको हो । जिल्ला प्राविधीक कार्यलय ओखलढुंगाका सहलेखापाल टेकनारायण यादवले खिजिदेम्बाको समेत काम गर...
चम्पादेवीका जनप्रतिनिधिले सवारी किन्न छुट्याएकाे ३ करोड ५५ लाखले सडक खने
ओखलढुंगा- ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिमा सवारी खरिद गर्न विनियोजन गरेको बजेट भौतिक विकासमा खर्च गरिएको छ । गाउँपालिकाको पहिलो गाउँसभाबाट पालिका र वडाका लागि सवारी खरिद गर्न विनियोजन गरिएको ३ करोड ५५ लाख रकम रकमान्तर गरेर विकासका काममा खर्चगरिएको हो । सुविधा लिने भन्दा पनि से...
सुनकोशीको धमिलो पानी पिउँछन ढेबुवाका माझिहरु
१० जेठ, ओखलढुंगा । सुनकोशी गाउँपालीका–१ ढेबुवा घाटका माझिहरुले वर्षौँ देखी सुनकोशी नदिको दुषित पानी पिउन बाध्य छन् । ढेबुवा घाटका माझिहरुले पिउदै गरेको खानेपानीको मुहान सुकेपछी अल्पसंख्यक समुदायका माझिहरुले ९ वर्ष देखी नदिको पानी, खानेपानीका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका हुन् । वर्खाम...
वडा अध्यक्षको व्यक्तिगत जग्गामा खेल मैदानः ६ लाख सरकारी बजेट विनियोजन
९ जेठ, ओखलढुंगा । सुनकोशी गाउँपालीका–१ बलखु साँधीमा व्यक्तिको जग्गामा निर्माण गरिएको खेल मैदानका लागि सरकारी बजेट विनियोजन भएको छ । खेल मैदान निमार्णका लागि सुनकोशी गाउँपालीका बाट रु. ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । खेल मैदान निर्माण गरिएको जग्गा सुनकाशी गाउँपालीका–१ का वडा अध...
युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको १ सय ७ औं जन्मजयन्ती मनाईयाे
ओखलढुंगा- युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको १ सय ७ औं जन्मजयन्ती बुधबार ओखलढुंगामा मनाईएको छ । श्रेष्ठको जन्मस्थानमा रहेको उनको शालिकमा माल्यार्पण,श्रद्धाञ्जलीसभा र साहित्यीक विचार गोष्ठी लगायतका कार्यक्रम गरेर जन्मजयन्ती मनाईएको हो । सिद्धिचरण संग्राहलयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा स...
शिक्षाको भवनः चार वर्षमा जग मात्र
८ जेठ, ओखलढुंगा । चार वर्ष देखी तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यलय ओखलढुंगाको भवनको निर्माण कार्य अलपत्र छ । निर्माण कम्पनीले भवनको जगमात्र हालेर चार वर्ष विताएका छन् । १८ महिनामा भवनको निर्माण कार्य सक्ने गरी ठेक्का नं. SSRP/2014/DEO/OKHALDHUNGA. गाल्वा÷पुष्पाञ्जलि जे.भी काठमाण्डौंल...
ओखलढुंगाबाट २ सय ३ जना मानिस हराए
ओखलढुंगा- ओखलढुंगाबाट तीन वर्षको अवधिमा दुई सय तीन जना मानिस हराएका छन् । प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷२०७३ देखी चालु आर्थिक वर्षको हाल सम्मको अवधिमा जिल्लाबाट दुई सय तीन मानिस हराएका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगामा व्यक्ति बेपत्ता भएको भनि हरेक दिन जस्तो खो...
ओखलढुंगामा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २१ वटा सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन् । दुर्घटनामा परि ७ जनाको ज्यान गएको ट्राफिक प्रहरी कार्यलय ओखलढुंगाले जनाएको छ । दुर्घटनामा ७४ जना घाईते भएका छन् । १० जना गम्भीर घाईते भएका थिए । यो अविधिमा सबै भन्दा बढी आठ ओटा मोटरसाईकल दुर्घनामा...